Abakhiqizi be-HDI PCB | I-China i-HDI PCB Factory & Abahlinzeki
8 ungqimba HDI PCB embonini yezokuphepha
Leli ibhodi lesifunda lesendlalelo eli-8 lomkhakha wezokuphepha. Amabhodi we-HDI, obunye bobuchwepheshe obukhula ngokushesha kuma-PCB, isiyatholakala ePandawill. Amabhodi we-HDI aqukethe ama-vias angaboni kanye / noma angcwatshwe futhi kaningi aqukethe ama-microvias we .006 noma ngaphansi ububanzi. Banobuningi besifunda obuphakeme kunamabhodi wesifunda wendabuko.
Kunezinhlobo ezi-6 ezahlukahlukene zamabhodi we-HDI, ngokusebenzisa ama-vias kusuka ebusweni kuye phezulu, ngama-vias angcwatshwe nangama-vias, ungqimba lwe-HDI amabili noma ngaphezulu nge-vias, substrate yokwenziwa engenawo uxhumano lukagesi, ukwakhiwa okungenasisekelo kusetshenziswa ngazimbili zezingqimba nokwakhiwa okuhlukile kokwakhiwa okungenasisekelo usebenzisa ungqimba ngazimbili.
10 ungqimba HIGH DENSITY INTERCONNECT PCB
Leli yibhodi lesifunda lesendlalelo eli-10 lomkhakha weTelecom. Amabhodi we-HDI, obunye bobuchwepheshe obukhula ngokushesha kuma-PCB, isiyatholakala ePandawill. Amabhodi we-HDI aqukethe ama-vias angaboni kanye / noma angcwatshwe futhi kaningi aqukethe ama-microvias we .006 noma ngaphansi ububanzi. Banobuningi besifunda obuphakeme kunamabhodi wesifunda wendabuko.
12 ungqimba HDI PCB yekhompyutha
Leli ibhodi lesifunda lesendlalelo eli-12 lomkhiqizo wekhompyutha we-Cloud. Amabhodi we-HDI, obunye bobuchwepheshe obukhula ngokushesha kuma-PCB, isiyatholakala ePandawill. Amabhodi we-HDI aqukethe ama-vias angaboni kanye / noma angcwatshwe futhi kaningi aqukethe ama-microvias we .006 noma ngaphansi ububanzi. Banobuningi besifunda obuphakeme kunamabhodi wesifunda wendabuko.
22 ungqimba HDI PCB lempi nezokuvikela
Leli ibhodi lesifunda lesendlalelo lama-22 lomkhakha wezokuphepha. Amabhodi we-HDI, obunye bobuchwepheshe obukhula ngokushesha kuma-PCB, isiyatholakala ePandawill. Amabhodi we-HDI aqukethe ama-vias angaboni kanye / noma angcwatshwe futhi kaningi aqukethe ama-microvias we .006 noma ngaphansi ububanzi. Banobuningi besifunda obuphakeme kunamabhodi wesifunda wendabuko.
I-HDI Circuit board yohlelo olushumekiwe
Leli ibhodi lesifunda lesendlalelo eli-10 lohlelo olushumekiwe. Amabhodi we-HDI, obunye bobuchwepheshe obukhula ngokushesha kuma-PCB, isiyatholakala ePandawill. Amabhodi we-HDI aqukethe ama-vias angaboni kanye / noma angcwatshwe futhi kaningi aqukethe ama-microvias we .006 noma ngaphansi ububanzi. Banobuningi besifunda obuphakeme kunamabhodi wesifunda wendabuko.
I-HDI PCB enomphetho ohlanganiswe ngeSemiconductor
Leli ibhodi lesifunda lesendlalelo eli-4 lokuhlolwa kwe-IC. Amabhodi we-HDI, obunye bobuchwepheshe obukhula ngokushesha kuma-PCB, isiyatholakala ePandawill. Amabhodi we-HDI aqukethe ama-vias angaboni kanye / noma angcwatshwe futhi kaningi aqukethe ama-microvias we .006 noma ngaphansi ububanzi. Banobuningi besifunda obuphakeme kunamabhodi wesifunda wendabuko.